Otu esi eto ntutu ọsọ ọsọ: ndụmọdụ 15 maka ntutu toro ogologo - Ịma Mma
Otu esi eme ka ntutu gị too ngwa ngwa ka ọ dị ogologo ma sie ike
Dị ka ndị ọkachamara si kwuo, ndụmọdụ ndị a na -arụ ọrụ n'ezie.
ọnọdụ agba ntutu ntutu oyi 2020
Ọ dịghị mgbe ntutu na -eto nwayọ karịa mgbe ịchọrọ ka ọ mee nke dị iche. Ọ bụrụ na ị na -eche ka esi eto ntutu ngwa ngwa, ihe mbụ ị ga -eburu n'uche bụ na ọ nweghị ọgwụgwọ ọrụ ebube mberede maka ịbefe n'etiti edozi isi ma ọ bụ na -etolite iri ihe na -adịghị mma n'otu abalị. Ná nkezi, ị kwesịrị ịtụ anya ọkara ọkara inch nke uto ọhụrụ kwa ọnwa - nke ahụ dịkwa n'okpuru ọnọdụ ahụike. N'ihi ihe ndị dị ka mmebi ma ọ bụ nri, ọ nwere ike ịdị obere. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, nwee ogologo ntachi obi.
Ozi ọma ahụ: Enwere ọtụtụ usoro dị mfe nke nwere ike ime nnukwu mgbanwe n'ịhụ na ị na -eru ọkara inch ahụ kwa ọnwa. Ịmepụta ntutu isi gị chọrọ ụzọ abụọ. Nke mbụ, ị ga-ebelata mbibi n'ofe ntutu niile iji gbochie ntutu isi na mmebi na-ebelata nwayọ. Na nke abụọ, ịchọrọ ebe na -eto eto nke ọma na mgbọrọgwụ, ebe ị na -ahapụkwa ihe ụfọdụ (dị ka agba na ihe ndozi) n'aka ndị ọkachamara nwere ahụmihe. N'okpuru, ndị ọkachamara ntutu na ntutu isi na -atụle ihe iri na ise kachasị dị irè ị nwere ike ime iji mee ka akwara ndị ahụ (nke nta nke nta) na -agagharị. Nke a bụ ndụmọdụ ha kacha mma ka esi eto ntutu ngwa ngwa.
1. Debe mkpa gị ma rịọ ka e mezie ahụ ike.
Ndị ọkachamara na -ekwenye n'otu na ị kwesịrị izere ịkpụ ntutu nke gị na kwarantaini ma ọ bụrụ na ị nwere ike, n'agbanyeghị ọnwụnwa ị nwere ịwepụ naanị otu inch ma ọ bụ abụọ. O yikarịrị ka ihe na -agazighị agazi dị elu karịa ka ọ na -aga n'ụzọ ziri ezi, ka onye na -edozi isi na -ekwu Justine Marjan . Kama nke ahụ, hapụ ya ka ọ na -eto ruo mgbe ị ga -enwe ike (ma ọ bụ nwee ahụ iru ala zuru oke) ịdebanye oge nnọkọ ọzọ. Ozugbo ịmechara, Marjan na -atụ aro ịrịọ maka mkpụbelata ahụike - na okwu ndị ọzọ, mee ka onye na -edozi isi gị mara na ị na -eto ntutu isi gị ma na -achọ naanị ịbecha isi ya ka ị ka na -enwe ogologo.
Ọ bụrụ na ebumnuche bụ ịpụta ntutu isi gị, ndidi bụ isi, ọ na -ekwu. Na -edozi onwe gị ugboro abụọ ma ọ bụ atọ n'afọ, ma ọ bụ karịa mgbe ọ bụla ma ntutu gị mebiri emebi ma ọ bụ na -agba ya mgbe niile.
2. Were ezumike site n'ịcha ọcha.
Ọ masịrị m ịsị na ntutu gị nwere ike dị mkpụmkpụ na keisi ma ọ bụ ogologo na ọchịchịrị, mana ị nweghị ike inwe ha, ka Marjan na -ekwu. Ịcha ọcha na igosi ntutu isi gị mgbe niile nwere ike iduga n'ịfefe oke, nke na -ebute mgbawa ma na -eme ka o siere ntutu ike ito nke ọma. Marjan na-atụ aro ka ịgbanwere agba ndị gbara ọchịchịrị n'oge uto gị wee họrọ agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba ma ịhọrọ nhọrọ demi- ma ọ bụ ọkara na-adịgide adịgide na salon, nke na-agaghị emebi mbibi na-enweghị isi.
3. Gbalịa jiri shampoo na -akọwapụta nke ọma.
Ọnọdụ akpụkpọ isi gị dị mkpa maka ito ntutu gị - ọ bụghị naanị ngwa ngwa, kamakwa ọ gbasiri ike ma sie ike. Dị ka onye na -ahụ maka akpụkpọ anụ si kwuo Ava Shamban, M.D. , ị nwere ike melite ahụike akpụkpọ isi site na imepụta ihu doro anya yana ihe ndị na -akọwa ihe. Dị ka ihu gị, akpụkpọ ahụ gị na -enwe nnukwu ọzịza na gburugburu ebe obibi, ọ na -ekwu. Idebe afụ ọnụ dị ọcha na -egbochi iwulite ma ọ bụ itigbu mmanụ.
Shamban na -atụ aro usoro ịchacha isi ọ bụla na salicylic acid (nke na -ewepụ akwa sel na nrụpụta sebum) na glycolic acid (nke na -abanye n'ime nke ukwuu). Ị nwekwara ike ịnwale ịme onwe gị site na iji shuga, mmanụ olive, mmanụ a ,ụ, na apụl cider mmanya. Ma ọ bụ tinye shampoo otu ugboro kwa izu nke akụkụ ya na-akọwa ma na-agba mmiri. Shamban masịrị ya Philip B. Pepemint ube oyibo ncha ntutu , nke na -ekpochapụ nrụrụ arụ na -ewepụghị mmanụ ala ya n'isi gị.
Philip B. Pepemint ube oyibo ncha ntutu
$ 34 Philip B. Zụta ugbu a
4. Họrọ ngwaahịa nlekọta ntutu nwere ihe ndị ezubere iche.
Ewezuga ncha ntutu ma ọ bụ nchacha nke na-eme otu izu kwa izu, ọ bara uru ịchọ ihe ndị nwere ike idobe ahụike ntutu gị n'etiti. Kerry Yates , ọkachamara ahụike akpụ isi na onye guzobere ndụmọdụ mara mma Mkpokọta ụcha , na-atụ aro mgbe niile otu nhọrọ nke botanicals na-egbu egbu. Aloe vera na -ebelata ozugbo na ọnọdụ na -enweghị mmetụta ọjọọ na mmepụta sebum, ọ na -ekwu. Fenugreek bara ọgaranya na niacin, nke nwere ike ịbawanye n'ọbara ọbara na follicle. Chamomile bụ ihe na -eme ka ahụ dị jụụ maka ahụ isi, mmanụ a honeyụ na -enyere aka gbochie uto nke nje na isi gị. Otu n'ime ndị ọkacha mmasị ya bụ Innersense Organic Hydrating Cream conditioner , jupụtara na aloe na-enwu enwu monoi na mmanụ ifuru oroma.
$ 30 Innersense Zụta ugbu a
5. Mepee ụbọchị ncha ntutu gị.
Ikpebi ugboro ole ị ga -asa ntutu gị na -adabere n'ikpeazụ ụdị ntutu gị. Mana ma ị nwere curls ma ọ bụ ntutu kwụ ọtọ, Yates anaghị atụ aro ịsa ntutu kwa ụbọchị. Iji ihe nhicha kwa ụbọchị nwere ike ịkpata nkụ na mgbakasị isi, ka ọ na -ekwu. Jiri a ncha ntutu dị ka usoro ụfụfụ a na -enye ume ọhụrụ si n'aka Paul Mitchell mgbe achọrọ ya, wee jiri nchacha sachaa echi ya.
Paul Mitchell Awapuhi Anụ ọhịa Ginger kpọrọ nkụ ncha ntutu
$ 23 Paul Mitchell Zụta ugbu a
6. Na-emeso onwe gị ọgwụgwọ miri emi.
Ahụike akpụkpọ ahụ dị mkpa maka ito eto, mana ọ na -eme ka ntutu gị nke ọzọ na -edozi ahụ, ọbụlagodi na ọ nwere mkpụrụ ndụ nwụrụ anwụ. Beecha ihe ndị mebiri emebi na mmebi site na ị na-eme mgbatị ahụ miri emi otu ugboro n'izu. Usoro ndị a ezubere iche na -enyere aka mee ka ntutu ntutu kaa akara ma dị larịị. Nwee ọgwụgwọ miri emi nke bụ akụkụ nke usoro gị mgbe niile, ka onye na-edozi isi kwuru Gina rivera , onye nwe Phenix Salon Suites.
Ya BioGen Complex Deep Conditioner dị ọcha enwere ike iji ya dị ka ihe mkpuchi oge niile ma ọ bụ nkpuchi nkeji iri, na-etinye ntutu na vitamin, collagen, na biotin. Onye na-ahapụ ọnọdụ nke ụkpụrụ bụkwa nhọrọ zuru oke maka curls na textures siri ike, na -ejikọ mmanụ na mmanụ a honeyụ dị arọ.
Ụkpụrụ Ntọhapụ Nwepụta
$ 20 Nlereanya Mma Zụta ugbu a
7. Gbanwee akwa ịsa ahụ gị maka ihe na-enweghị ntụpọ.
Ozugbo ị na -asa ahụ, ntutu gị nọ n'ọnọdụ ya kacha emebi emebi. Zere imebi site n'iji akwa nhicha nke na -agaghị adọkpụ ma dọpụta. Ihe nhicha kacha mma a ga-eji maka nhicha ntutu bụ akwa nhicha na-abụghị terry, ka Yates na-ekwu. Enweghị oghere dị warara na -egbochi ịdọpụta oke, nke na -adịghị mma maka ahụike ntutu. Ọ na-atụ aro ka a na-eji T-shirt owu ochie mee ya, nke na-enye ihu dị larịị maka ntutu isi gafee n'elu na-ejideghị ya. Nhọrọ ọzọ bụ Aquis Lisse Luxe Hair Turban, nke nwere ọwa mmiri na-amị mmiri n'ọnọdụ loops, na-agba ume ịkpụ ntutu isi ka ọ dina ala ma kpọọ nkụ ngwa ngwa.
Aquis Lisse Luxe ntutu isi
$ 30 Mmiri Zụta ugbu a
8. Wedata mmebi okpomọkụ.
Ito ntutu isi gị apụtaghị ịchapụ ngwa ọrụ na -ekpo ọkụ kpamkpam, mana ibelata mmebi ọkụ na -ebelata oke nkụ na nkewa. Ana m akwado ngwaọrụ ọkụ ọkụ Ghd n'ihi ọnọdụ okpomọkụ ha zuru ụwa ọnụ, nke na -edozi ntutu gị n'ebughị ụzọ kpụpụsị ọnya ma na -enye aka na mmebi ọkụ, ka Marjan na -ekwu. Rivera na -atụ aro ahịrị dịka Site na Gina na teknụzụ infrared smart, nke na -akpọchi mmiri n'ime ntutu. Na mkpokọta, debe ndị na-ehicha nkụ, igwe dị larịị, na curling na-agagharị na ntọala ọkụ dị ala mgbe enwere ike iji gbochie ịcha ntutu. (Ma jikọta ha mgbe niile na onye na -echebe ọkụ.)
Ghd Platinum Ọkachamara Styler
$ 249 Ghd Zụta ugbu a
9. Ghichaa ntutu gị — nke ọma.
Ịcha ntutu isi na -eme ihe karịrị ịkagbu ya; ọ na -atọhapụkwa mkpụrụ ndụ nwụrụ anwụ, na -eme ka mgbasa akpụkpọ ahụ dị mma, ma na -ekesa mmanụ n'ime ntutu isi gị niile. Shamban na -atụkarị aro ka ndị ahịa ya nwere isi ọfụma tinye usoro a site na iji bristle brush kwa ụbọchị. Cheta na ntutu na -esighi ike ịsa ahụ, yabụ na ọ kacha mma ịme nke a ozugbo ntutu gị anaghị agba mmiri. Jide n'aka na ị ga-etecha nwayọ wee jiri ahịhịa na-adịghị emerụ ahụ nke na-agaghị adọta ma ọ bụ kpaa ntutu isi, Marjan kwuru. Ọ na -amasị m The Wet Brush Original Detangler n'ihi bristles ha na -efegharị n'enweghị nsogbu ọ bụla. Malite na nsọtụ ya wee jiri nwayọ rụọ ọrụ elu.
Lelee ntuziaka anyị ka esi ete ntutu isi n'ụzọ ziri ezi.
$ 16 Ahịhịa ahịhịa Zụta ugbu a
10. Tinye ego n'akpa isi silk.
Ohiri isi silk nwere ike bụrụ mgbanwe kachasị mfe ị nwere ike ime nke na -ewepụta nnukwu ụgwọ ọrụ, Marjan kwuru. Mgbe ị na -ehi ụra na akwa ohiri isi, akwa nwere ike wepu mmiri site na ntutu gị n'otu abalị wee kpatara esemokwu nke na -eduga na nkụ na ịdọrọ. Ịra ụra na silk abụghị naanị na -eme ka ndụ ntutu gị dị ogologo, kamakwa ọ na -eme ka ntutu dịkwuo mma, ka Marjan na -ekwu. Okwu ndị a mara mma sitere na Alaka na -eme ka ọ dị nro mana nke ukwuu n'agbanyeghị ugboro ole ị na -asacha ha, mana ị kwesịrị ileba anya na ndakpọ anyị. akpụkpọ ụkwụ silk kachasị mma jiri ego gị.
Trendy Charmeuse Silk Pillowcase
$ 95 Nkwụnye Zụta ugbu a
11. Gua sha isi gị.
Ọ bụrụ na ịnwalela gua sha n'ihu gị, enwere ike itinye otu usoro ahụ n'isi gị iji kpalite ntutu. Nke a bụ nnukwu ọgwụgwọ tupu ịcha ncha, a ga-ejikwa mmanụ mee ya n'isi gị, ka Marjan na-ekwu, onye na-atụ aro ma ọ bụ mmanụ osisi tii. Mmanụ Castor nwere acid dị mkpa nke na -edozi isi gị ma na -egbochi ntutu isi ịda, na -ebute oke na ntutu dị mma, ka ọ na -ekwu. Mmanụ osisi tii bụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ mmetụta jụrụ oyi, mmetụta na -akpali akpali. Ejikọta ha abụọ Nkume Snowfox nke Black Obsidian Gua Sha na isi ịhịa aka anọ ya.
Snowfox Black Obsidian Hot Stone Gua Sha
$ 22 Snowfox Zụta ugbu a
12. Jiri eriri ntutu isi na-adịghị ala ala.
Dịka akwa ohiri isi, elastics nwekwara ike ịdọrọ ntutu gị ma ọ bụrụ na ị kpacharaghị anya. Ịdọta oge niile ga -ebute mbibi follicle na -adịgide adịgide ma gbochie ụmụ irighiri akwara ịrụ ọrụ nke ọma, Yates kwuru. Ọ bụrụ na -amasị gị iyi ntutu isi gị na ọdụ ịnyịnya siri ike, nwalee ntakịrị ntakịrị, gaa na nkuku olu gị, ka ị belata oke. Tụleekwa ịgbanye elastics gị oge niile maka ịchafụ silk ma ọ bụ njikọ ntutu nke na -ekesa nrụgide karịa, dị ka Invisibobble.
Mgbanaka ntutu enweghị atụ
$ 8 Apụghị ịhụ anya Zụta ugbu a
13. Were biotin, iodine, na mgbakwunye zinc.
Ndepụta ihe na -arụ ọrụ nke ọma n'ịdokwa ahụike ntutu ruo oke, mana mgbakwunye bụ ụzọ amamihe ọzọ iji nweta nri gị. Enweghị ọgwụ ọrụ ebube nke ga -eme ka ntutu too ngwa ngwa ngwa ngwa, mana ụfọdụ ihe nwere ike inye aka na usoro a. Shamban na -akwadokarị ndị ọrịa ya biotin, nke na -arụkwa ọrụ n'ime ime dịka ọ na -eme n'elu. Onye na -edozi ahụ Jessica Sepel , onye nchoputa Vitamin JSHealth , na-enwe mmasị na iodine na kelp na zinc, nke a na-egosi na vitamin Hair + Energy ya. Iodine nwere nyocha na -ekwe nkwa iji kwalite ahụike na uto ntutu, zinc nwere ike inye aka idobe ya, ọ na -ekwu.
JSHealth Hair + Formula Energy
$ 45 JSHealth Zụta ugbu a
14. Rie nri bara ụba na iron, protein, na abụba dị mma.
Sepel na-atụ aro ị toa ntị na nri nri gị oge niile, ebe ị na-enweta ọtụtụ ihe na-eme ka uto gị too. Tinye ihe nri dị iche iche iji kwalite ntutu ka mma, ka ọ na -ekwu. N'elu ndepụta ya bụ nri nwere iron na protein dị ka anụ uhie, akwụkwọ nri, mkpo, ọkụkọ, tofu, ọkụkọ, azụ, na akwa. Abụba dị mma dị na salmon, ube oyibo, na mkpụrụ nwekwara ike inye aka kwalite ntutu na -enwu gbaa.
15. Belata nchekasị.
Shamban na -ekwu na nchekasị na mgbanwe homonụ bụ isi ihe na -akpata ntutu isi na ịdị gịrịgịrị na ụmụ nwanyị. Mgbe ị na -adịghị mma, a ga -atụgharị ike nke ịkwado isi na ntutu isi n'akụkụ ndị ọzọ nke ahụ gị, ka Yates kwuru. Naanị ịdabere na ọgwụgwọ mpaghara na nke ndị a agaghị enyere aka isi ahụike aka.
Nke a dị mfe ikwu karịa ime, mana ma ibelata nrụgide na -agụnye ịgbanye ihe na -ekesa mmanụ dị mkpa ma ọ bụ soro dọkịta gị nwee ogologo mkparịta ụka, ọ bụ nzọụkwụ ikpeazụ dị mkpa. Akọcha obi ụtọ na -eto ntutu dị mma , ka Shamban na -ekwu.
Sarah Wu bụ onye edemede na Berlin. Soro ya na Instagram @kwuo.wu .
ezigbo jeans maka ntutu dị mkpụmkpụ
ndị isi ojii nwere ntutu kwụ ọtọ
onyinye ekeresimesi maka ndị nwere ihe niile
okpu okpu kacha mma maka ụmụ nwanyị